Btrfs Si aad u isticmaasho ama aadan u isticmaalin? [Khibrad Shaqsiyadeed] | Laga soo bilaabo Linux
Btrfs Si aad u isticmaasho ama aadan u isticmaalin? [Khibrad shaqsiyeed]
joaco | | Kuwa kale
Waxay ila noqotay inaan qoraal ka sameeyo btrfs, nidaam faylal oo mustaqbalka loo malaynayo inuu beddelayo ext4, taas oo hadda ah tan ugu dhaqsaha badan uguna isticmaalka badan, marka lagu daro kala-goynteeda waxay u dhowdahay nil, ilaa aad ka heysato disk oo leh in kabadan 95% boos buuxa.
1 Laakiin maxay Btrfs qorsheyneysaa inay horumariso markaa?
2 Astaamaha ugu muhiimsan ee Btrfs ee la heli karo xilligan waa:
3 Tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan horumarka ama mashruuca horumarinta:
4 Khibradeyda shaqsiyadeed
Laakiin maxay Btrfs qorsheyneysaa inay horumariso markaa?
btrfs waa nidaam faylal ay soo saareen Oracle, iyadoo ay ka soo qayb galeen Red Hat, SUSE, Intel, iyo kuwo kale. Marka la eego, waa in la ogaadaa in SUSE ay carrabka ku adkeyneyso in ay hadda diyaar u tahay in loo isticmaalo aagga ganacsiga, waxaana horeyba loogu bixiyay sidii ugu habboonayd qaybinta shirkadda 'SUSE Enterprise'.
Maxay muhiimad weyn u leedahay isticmaalkeeda? Tani waxay sabab u tahay horumarin badan oo ay keento Btrfs, qaar badan oo ka mid ahna ay yihiin kuwo asal ah oo wax badan ikhtiraaca aagga nidaamka faylasha btrfs waa nidaam fayl nuqul-ku-qor« raadinta xasilloonida, xitaa haddii wax qaldamaan, iyo sahlanaanta hagaajinta nidaamka iyo maamulka.
Astaamaha ugu muhiimsan ee Btrfs ee la heli karo xilligan waa:
Kordhinta faylka ku saleysan fidinta
2 ^ 64 bytes == 16 EiB cabirka faylka ugu badan
Meel yar oo faylasha lagu rakibo oo hufan
Boosaska tilmaam wax ku ool ah oo bannaan
Qoondaynta inode ee firfircoon
Qor snapsts, sawir-aqrin keliya
Subvolumes (xididdada nidaamka faylka gudaha oo gooni ah)
Hubinta xogta iyo metadata (CRC32C)
Cadaadis (zlib iyo LZO)
Taageero qalab gundhig badan
Qeybinta feylka, muraayadaha, feylasha feylka + muraayadda, oo lagu fekerayo hirgelinta feyl hal iyo labalaab ah
Wacyigelinta SSD (Flash Storage) (TRIM / Tuur si aad u soo sheegto xayeysiisyo bilaash ah oo dib loo isticmaali karo) iyo hagaajinta (tusaale ahaan, ka fogaanshaha niyadsamida raadinta aan loo baahnayn, u dirista qoraalo koox koox ah, xitaa haddii ay ka socdaan feylasha aan la xiriirin. Tani waxay keeneysaa hawlgallo qoris ballaaran iyo qoraal dhakhso badan waxqabadka)
Kaydinta kororka hufan
Nidaamka tirtirka asalka si loo helo loona saxo khaladaadka ku jira faylalka leh nuqulada xad dhaafka ah
Qaloocinta nidaamka faylka ee internetka
Hubinta nidaamka faylka qadla'aanta
U beddelashada nidaamyada faylasha jira ee ext3 / 4
Qalabka abuurka. Abuur nidaam fayl ah (akhrin) oo u shaqeeya sidii tusaale loogu talagalay abuurista nidaamyada kale ee faylasha Btrfs. Nidaamka faylasha ee asalka ah iyo aaladaha waxaa lagu soo daray bar bilow-akhris ah oo loogu talagalay nidaamka faylasha cusub. Isticmaalka nuqul-ku-qorid, dhammaan wax ka beddelka waxaa lagu keydiyaa aalado kala duwan, asalka asal ahaan isma beddelin.
Subvolume kootada taageerada -wareysi
Subvolume beddelka dirista / helitaanka
Nidaamka Faylka Kordhinta Waxtarka leh
Dufcaddii, ama ka baxsan-band, nuqul (taas oo dhacdaa ka dib markii wax qora, ma inta lagu jiro)
Tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan horumarka ama mashruuca horumarinta:
Ma jiro hubin isku xirnaanta nidaamka faylasha
Shayga heerka muraayadda iyo xoqidda
Algorithms-ka Checksum-ka Kale
Hubinta nidaamka faylka ee internetka
Hababka kale ee riixo (dhakhso, LZ4)
Raadinta xogta kulul iyo u dhaqaaqida aaladaha degdegga ah (oo hadda lagu riixayo inay tahay muuqaal guud oo laga heli karo VFS)
Kala-soocidda kooxda-kooxeed (waxay dhacdaa inta lagu jiro qorista)
Waa in la cadeeyo in Btrfs durba waxaa loo arkaa mid deggan iyo in aysan jirin isbeddelo badan oo la qorsheeyay mustaqbalka, haddii aysan jirin sababo aad u wanaagsan oo sidaas loo sameeyo mooyee. Si kastaba ha noqotee, waxay isku dayaan inay hagaajiyaan xawaaraha Btrfs oo leh kernel kasta oo cusub oo Linux ah, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa inaad haysato had iyo jeer kernelkii ugu dambeeyay ee lagu rakibay iyo nooca ugu dambeeya ee qaybintaada GNU / Linux.
Sidoo kale, waxaa lagugula talinayaa gaar ahaan darawallo waawayn, oo ah halka ay btrfs wax cusub soo saaraan oo faa'iidooyinkeeda la dareemi karo. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay taageero loogu talagalay tikniyoolajiyadaha ugu dambeeyaymarkaa haddii aad leedahay SSDs waxaan u maleynayaa inaad ku arki doontid horumar ka badan ext4 maadaama ext4 ay wali isticmaaleyso xoogaa farsamooyin duug ah.
Distro aan jeclahay waa OpenSUSE waana midda aan ku isticmaalo netbook-gayga laga soo bilaabo 2011, markaa waxaan u qaabeeyey qaybinta btrfs si aan u tijaabiyo, runtiina waxay tahay inay si gaabis ah uga shaqeysay netkeyga marka loo eego ext4. Waqti dheeri ah ayey qaadatay in labilaabo kumbuyuutarka waxaana dareemay xayiraad dheeri ah, in kastoo aan u maleynayo inay si dhaqso leh u nuquliso feylasha. Waxay u maleyn karaan inaan eex ku jiro, laakiin waxaan qaatay waqtiyada jawaabta si aan u hubiyo wayna gaabis ahaayeen nidaamkuna runtii wuxuu dareemay inuu ku dhegan yahay.
Btrfs horeyba waxaa loogu tixgeliyaa inay xasilloon yihiin, waxay ku caddeeyeen bogooda rasmiga ah, sidaas darteed:
Haddii aad haysatid PC waxyar duug ah, ku dheji ext4
Haddii aad hayso wax cusub oo leh SSD, isticmaal btrfs.
Maskaxda ku hay in ay qorsheynayaan inay hagaajiyaan isdhexgalka iyaga oo la shaqeynaya mid kasta oo cusub oo Linux ah, sidaa darteed mustaqbalka waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan in la siiyo isku day, sidaa darteed xitaa haddii ay hadda haystaan ​​qalab duug ah, xawaarahoodu wuu ka badnaan karaa tan ext4 ee mustaqbalka, laakiin xilligan, ugu yaraan, laguma talinayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Btrfs Si aad u isticmaasho ama aadan u isticmaalin? [Khibrad shaqsiyeed]
53 faallooyin, ka tag taada
Waa lagama maarmaan in la sameeyo imtixaanno ku saabsan buugga 'ultrabook' ee leh 'SSD', si dhab loo dhaho haddii waxqabadkeedu ka sarreeyo, maxaa yeelay xitaa haddii "loo maleeyo" in ay ka awood badnaan doonto qalabka kaliya "aragti ahaan" waxay soo jiidan doontaa rabitaankeenna daahfurka. Dhinacooda, dadka Phoronix waxay sameeyeen tijaabooyin: http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=btrfs_linux31_ssd&num=1
Ku jawaab ArthurShelby
Runtu waxay tahay inay tahay bedel wanaagsan EXT4, taas oo, inkasta oo ay tahay bedelka ugu fiican ee NTFS (aniga ahaan, kan ugu caansan), waxay iga tagi jirtay dareen ah inay u yartahay wax yar si ay u hesho waxqabad wanaagsan .
Sikastaba, waxaan rajeynayaa in nooca Debian ee soo socda la heli doono.
PS: Waxaan isticmaalayaa Lynx maxaa yeelay waxaan xallinayaa mushkilad ka dhalatay darawalka fiidiyowga 'Intel' ee aan ku rakibo miiskeyga Debian.
Xubuntu 14.04 oo ku taal Btrfs: hawlgallada qaarkood way ka gaabin yar yihiin ext4 - iyo ext4 _is gaabis, inkasta oo aysan u badnayn baradhada macaan ee NTFS.
Intaas waxaa sii dheer, Btrfs ma ahan nidaam faylal ah sidii aan horay ugu baran jirnay, waa caalam laftiisa laftiisa, haddii aadan si faahfaahsan u aqrin doonin wiki, ha rakibin, waxay noqon doontaa madax xanuun (tusaale ahaan qalabka sida df [dfc) ] ama du [cdu] si sax ah ugama shaqeeyaan Btrfs waana inaad isticmaashaa qalabkaaga).
Xaaladdayda ugu dambayntii waxaan doortay Btrfs tan iyo markii aan rakibo Wincrap way adag tahay in la isticmaalo LVM, waad awoodi kartaa laakiin waa inaad ku sameysaa sixir gacanta Waxaan rabay inaan qalinkeygu shaqeeyo sida ugu dhaqsaha badan.
Haddii aadan haysan rakibida Winbosta, LVM + ext4 waa isku-dhafid heer sare ah: dabacsanaanta iyo amniga isticmaalka LVM oo leh nidaam feylal ah oo sii wanaajinaya - iyo gilada ayaa si adag ula dagaallantay waqtigaas ...
Xaaladdayda, dhibaatadu si sax ah uma ahan NTFS, laakiin waa is-dhexgalka Windows Vista laftiisa.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Weligay ma isticmaalin LVM waxaanan filayaa inaanan isticmaali doonin, laakiin way fiicantahay in la ogaado waxyaalahan. By habka, maxaa horumar ah oo la isticmaalayo LVM?
Btrfs waa nidaam faylal ah. LVM waa nidaam kala-saaris. Waxaa jira maqaal dhameystiran oo ku saabsan Wikipedia.
Isku mid kiiskeyga, waxaan dareemay btrfs aad u gaabis ah, waxaan doorbidaa ext4.
Waa run, way igu dhacday aniga, waxaan doonayay inaan tijaabiyo oo waxaan u arkay si tartiib tartiib ah.
ext4 wax dhib ah ima siinin ilaa iyo hadda
Waxaan haystaa laba boot sidaa darteed qaybaha kale ee ntfs
runtiina ma arko kala duwanaanshaha kala dhaxeeyo ntfs
hadda ma ahan inaan tijaabiyo nidaamyada faylasha
Waxaan ku jirnaa xaalad isku mid ah markay tahay faylalka nidaamka tijaabinta.
Waqtigan xaadirka ah waxaan u isticmaalaa Debian Lenny nidaamka reiserfs 3.6 ee kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka, maadaama ay horeyba u duugowday waxaan bilaabay tijaabinta (disk kale) Debian Wheezy. Maaddaama reiserfs-ka aan la heli karin in loo isticmaalo rakibidda (in kasta oo ay suurtagal tahay in nidaamka lagu rakibo qayb qayb hore loogu qaabeeyey reiserfs), waxaan ku tijaabiyay btrfs, ext4 iyo xfs, marka lagu daro reiserfs oo ah habka aan soo sheegnay. Imtixaanadii laga qaaday, waxa ugu haboon ee aan ku arkay waxay ahayd in labadaba ay la socdaan ext4, reiserfs iyo xfs wax qabadku isku mid ayuu ahaa, laga yaabee aragtida waxyar oo dhaqso badan markii la isticmaalayo xfs, laakiin xaqiiqdii way ka gaabis badnayd markii la isticmaalayay btrfs, ee xaqiiqda kaliya rakibaadda waxay qaadatay qiyaastii saddex jeer inta ay ku jirtay nidaamka feylashaan. Sidoo kale, sida lafilayo ext4, qiyaastii 5% meel banaan oo la isticmaali karo ayaa luntay marka lakala qeybsanayo, sidaa darteed waligey uma tixgalin wax ext * ah ikhtiyaar wanaagsan Tan iyo markii aan kumbuyuutarkeygii ugu horeeyey (Suse Linux 6.4) ku rakibey PC-ga oo leh 20 Gb disk aan isticmaalay reiserfs (waagaas waxay ahayd tijaabo). Faa'iido darrooyinka dib-u-qiimeynta waa in la sheegaa, marka laga soo tago xaqiiqda ah inaysan mar dambe lahayn waxqabad firfircoon iyo taageero, waa muddada dheer ee ay qaadanayso in la sii fuulo, iyada oo si muuqata loo dareemi karo marka la kala qaybsamo. Marka loo eego xfs, cilladda aan helay waxay tahay in aan la beddeli karin ...
Raadinta macluumaadka internetka ee ku saabsan nidaamyada faylka ee la heli karo si loogu beddelo reiserfs Waxaan akhriyay qormooyin ay ku tilmaameen xfs maaddaama ay leedahay naqshad wanaagsan iyo horumar firfircoon oo la cusbooneysiiyay si looga faa'iideysto processor-yada casriga ah ee multi-core, marka lagu daro Red Hat ayaa hadafyadeeda u dejisay nidaamka faylkan.
Sikastaba, xilligan xaadirka ah xfs waxaan u arkaa inay tahay bedelka ugu fiican, ugu yaraan desktop-ka, si dib loogu dhigo (kor ku xusan ext * iyo btrfs).
Ku jawaab konqueror3
Faahfaahin weyn, waxay umuuqataa xfs inay tahay bedel aad ufiican, inkasta oo aan aad ujecelyahay inaan waxbadan kadhigo diskiga, marka ma garanayo hadii aan isticmaali lahaa, laakiin xaqiiqdii waan isku dayi doonaa.
Aad uma fiicna macluumaadka, hubi jawaabtayda.
Qiimeyntaada waxqabadka Btrfs waa mid qalloocan, waxaan u maleynayaa aqoon la'aan awgeed.
Wheezy wuxuu adeegsadaa kernel 3.2 taas oo heerarka maanta ay yihiin quasi Paleolithic.
Sida teknoolojiyad kale oo badan oo Linux ah, Btrfs-ka badankiisa waxaa laga helaa isla halbeegga oo kuma jiro barnaamijyada isticmaalaha, sidaa darteed waxaa jiray tiro koobnaan aan la soo koobi karin oo ah astaamo iyo bugfixes ka soo baxa 'kernel' oo adeegsanaya 'kii hore' ilaa xarkaha aan isticmaal maanta inta hartay ee casriga ah (3.12,3.13 iyo 3.14).
On Xubuntu 14.04 (kernels 3.13 iyo 3.14-pf) iyo ChakraOS (kernel 3.12.6) Btrfs waxay u socotaa si aan fiicnayn haddii aysan ka dheereyn ext4. Ciqaabta kaliya ee ay ku leedahay xagga akhriska iyo xawaaraha qorista waxay ku jirtaa hawlgallada keydinta xogta degdegga ah - oo loo diiwaangeliyey illaa dhimasho.
Waa run in noocyada ugu dambeeya ee Linux darawallada btrfs ay tahay inay heleen waxyaabo aan la soo koobi karin oo ah astaamo iyo bugfixes, laakiin taasi sidoo kale waxay run ku noqon doontaa xfs.
In kasta oo inkasta oo aanan haysan aqoon farsamo iyo mid qoto dheer oo ku saabsan nidaamka faylalka, darawalada Linux, iyo kuwa kale ... Marka laga soo tago xaqiiqda ah in sanado ka hor aan joojiyay isku dayga iyo tijaabinta dhammaan barnaamijyada distro iyo barnaamijyada cusub ee aan la kulmay (waqtiyada wanaagsan!), Tijaabada taasi waa, wali waxaan isticmaalaa Debian Lenny! hehe! Taasi waa sababta aanan weli uga boodin durugta illaa iyo inta cilmi-baaristeyda iyo tijaabooyinkeyga ku saabsan nidaamka faylka ee aan u isticmaali doono beddelka reiserfs-ka ay dhammaanayaan; in xilligan musharraxa koowaad uu yahay xfs. Waxaan sidoo kale aaminsanahay inaan haysto shuruudo igu filan iyo awood aan ku doorto waxa aan u maleynayo inay ugu fiicnaan laheyd baahiyaha aan qabo, kuwaas oo ku dhow kuwa isticmaalayaasha guud ee kombuyuutarka guriga ...
Waxaan uga tagayaa iskuxirka maqaal xiiso leh oo cinwaankeedu yahay: Koofiyad Cas waxay u maleyneysaa in XFS ay ka fiican tahay nidaamka faylka marka loo eego Ext4. Kuwaas oo aan iftiiminayo jumlad fikrad ka bixinaysa sababta btrfs ay uga gaabin karto xfs: samee waxa…
Xiriirinta maqaalka: http://diegocg.blogspot.com.ar/2013/06/red-hat-xfs-es-mejor-sistema-de.html
"Waa run in noocyada ugu dambeeya ee Linux darawalada btrfs ay tahay inay heleen tiro aan lagu koobi karin oo ah astaamo iyo bugfixes, laakiin taasi sidoo kale waxay run ku noqon doontaa xfs."
Qoraal qalad ah: "Waa run in eeygayga Dalmatian uu leeyahay 4 lugood iyo 1 dabo, waa inay run noqotaa markaa in eeyaha oo dhan oo leh afar lugood iyo mid dabo leh ay caddaan yihiin oo ay dhibco leeyihiin."
Ma raacdaa horumarka XFS? Ma ahan aniga, laakiin waxaan ku dhiiran lahaa inaan dhaho xitaa uma dhawa xawaaraha horumarka ee Btrfs. Xaqiiqdii ... waxay leedahay horumarin hadda jirta, mise kaliya bugfixes? Sannado waa dhaafi karaan, daa'in haddii aad rabto wax qabadkuna ma hagaagayo haddii uusan jirin cid ka dambeysa xusulka 😀
Waxaan gabi ahaanba fahansanahay xanuunkaaga markaan katagayo ReiserFS, oo kamid ah nidaamka faylasha ugufiican abid, ceeb ah inaysan u ogolaanayn inay kusii socdaan horumarka ...
Marka laga hadlayo baahidaada inaad raadiso nidaam feylal cusub, waxaan kugula talinayaa isku-darka LVM + ext4, Btrfs waa ajnabi aad u badan, waa inaad aqriso wax badan si aad si sax ah ugu adeegsato ugana faa'iideysato sida ugu macquulsan, runti maahan "rakib iyo iska ilow "tiknoolajiyada sidoo kale Manuel wuxuu ku sharxayaa xiriirkiisa, taas oo u baahan shaqo dheeri ah si loo ilaaliyo.
Haddii aadan haysan Wincrap rakibay, LVM + ext4 waa ammaan. Xaqiiqdii Btrfs waxaa loogu talagalay xoogaa in lagu beddelo baahida loo qabo nidaamka faylka LVM + X.
Dhanka Debian, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso Tanglu (halkan lagu xusay DL), Semplice (xasilloon Sid) ama mid ka mid ah qashin-qubka cusub ee isku dayaya inuu cusbooneysiiyo, saldhig Debian u adeegsado iyo teknoolojiyadda maanta.
Aniga ahaan way i qancisay markii aan isku dayay Dukumiintiyada Gnome. Iyadoo la raacayo ext4 raadinta dukumiintiyada waxay qaadatay qarniyo. Iyada oo btrfs ay ahayd hawlgal deg deg ah.
Waxaan ku isticmaalay fedora 16 mana aanan dareemin wax isbedel ah. Waqtigaas ka dib waxaa loo tixgeliyey inuu yahay mid aan degganeyn sidaa darteed waxaan sii haystay noloshayda oo dhan
Manuel Escudero dijo
BTRFS waa nidaam fayl aad u fiican, oo ka mid ah faa'iidooyinka aan ogaaday inuu xawaare dheeri ah ku jiro kumbuyuutarradeyda (iyadoo la adeegsanayo qeybta / hoosta BTRFS) ee server-yada, u dulqaadashada weyn ee ciladaha sababa musuqmaasuqa xogta (Under Ext4 haddii aad damiso adeege waxay socotaa MongoDB daemon keydka xogta waxay kaa dooneysaa inaad dib u howlgeliso adoo tirtiraya faylka «/var/lib/mongodb/mongod.lock» iyo dib u bilaabida mongod daemon, BTRFS hoosteeda tani ma dhacdo sababtoo ah qaabkeeda CoW iyo kuwa kale Goodies) . Marka lagu daro awooda "soo nooleynta" darawalada adag ee burburay (Sida iska cad waxay horey ulahaayeen Windows NTFS waxayna kudhamaadeen si aad u xun oo aysan aqbalin rakibaadda Linux oo leh Ext4 iyadoon lagu guuldareysan).
DHIBAATADA ayaa ah in BTRFS aysan ahayn nidaam fayl oo ka shaqeeya "sanduuqa banaanka" ee loogu talagalay isticmaalaha sida ExtX, oo aan u baahnayn dayactir dheeraad ah ama hagaajin. Waxaan u isticmaali jiray BTRFS wax soo saar ilaa Fedora 15 (waxaan joogaa Fedora 20 hada), mudo kadib waxaan ogaaday waxyaabo badan oo looga baahan yahay inay si fiican uga shaqeeyaan, oo ay ku jiraan howlaha dayactirka ee aan ku sharaxay. qodobkan:
(Taas, waxyaabo kale oo badan, kala-qaybsanaanta caadiga ah ee nidaamkani ku lug leeyahay waa laga fogaadaa)
iyo sidoo kale waxaan ogaaday in noqoshada 'CoW filesystem' wax walba ay yihiin "goob, goob, goob." Waad aragtaa, BTRFS waxay ku fiican tahay qaybta / qayb ahaan dabeecadeeda iyo faylka gelitaanka faylka, laakiin haddii aad ku dhejiso qaybta / guriga ka dibna aad rajeyso inaad ordo tusaale ahaan wax gadaal-gadaal u qoraya dirawal adag (sida Mashiin dalwad leh oo "disk adag" uu ku jiro / guriga btrfs) nidaamku si fudud wuu barafoobaa maxaa yeelay CoW looma samayn nooca hawlgalkaas (in kasta oo ay ka shaqeyneyso) ...
Dhamaadka maalinta, waxaan u maleynayaa inay tahay waxayaabahaas awgood oo aanan wali u arkin inay tahay "default default" ee inta badan weli, maxaa yeelay waxyaabahan waa dhibco in laga shaqeeyo shaki la'aan.
Ku jawaab Manuel Escudero
Faahfaahin aad u fiican, haa waxaan ku daray faa'iidooyinkaas boostada, laakiin waxaan ahay isticmaale guri (si aan u hadlo), xulashooyinkaasi wax badan igama galin aniga sidoo kale ma hubo sida ay u shaqeeyaan gabi ahaanba, sidaa darteed waxaan hayaa kii shaqeeyay aniga iigu fiican. In kastoo, sidoo kale waxaan tijaabinayaa xfs wixii ay kor ku sheegeen.
Wixii SSD ah waxaan ku sharxi lahaa f2fs
Waxaan maqlay tixraac wanaagsan btrfs, iyo dhibaatada in la beddelo (hadaan rabo), waa inaan qaabeeyaa waxkasta, iyo maadama aan hayo macluumaad aad u tiro badan, waxaan la kulmi lahaa dhibaatooyin taageerid ah ._.
Way fiicantahay inay horey u xasilloonayd, in kastoo aanan garanaynin in dhammaan waxyaabahaas (halkan ku yaal Gentoo kiiska kama wada hadlin). Dhanka kale, waxaan ku dhagannahay ext4 arrimaha caadeysiga iyo xasilloonida.
Aniguna wax riwaayado ah kuma lihi raadinta faylasha, waxaanan haystaa wakhti adag oo aan ku muujiyo si aan u dedejiyo raadinta, sababtoo ah meel disk adag oo loo baahan yahay: /
Waxaan isku dayi lahaa btrfs markay aad u ballaadhan tahay waxaanan raadsan lahaa sidaan dib ugu soo celin lahaa in muddo ah (iyo sidoo kale marka aad waddo adag oo ka weyn :)
Waad salaaman tahay, waxaa loo arkaa inay xasilloon tahay horumariyayaasheeda wax ka badan, meelaha kale ee kale, marka laga reebo SUSE ama Fedora, lamana falanqeynayo, in kasta oo SUSE ay horay u qaadatay sidaan kor ku sheegay.
Mmm hada waan fahmay. Gadaal baan sugayaa markaa. Mahadsanid 😀
Maya, uma baahnid inaad wax walba qaabeyso. Qaybaha 'ExtX' waxaa si daah fur ah loogu haajiray Btrfs iyadoo laga faa'iideysanayo dib u noqoshada isbeddelada (taas oo ah, dib ugu noqoshada nidaamki hore ee faylasha) haddii aad rabto.
Wanaagsan in la ogaado. Waxaan sugi doonaa in Btrfs ay helaan taageerada ugu badan sida ext4 oo ay u weynaadaan sida ext4 ay hada tahay. Waad ku mahadsan tahay, waxay iga dhigeysaa mid deggan markii ay noqoto inaan rabo inaan kufaano nidaamka faylkaas 😀
Waxaan ku haystaa BTRFS SSD-kayga labadaba KaOS iyo Antergos, hadda ma aanan dareemin wax la yaab leh, taas oo ah, waxaan haystaa qaboojiyaha fstab.
Waan ka tagayaa haddii ay qof caawiso.
UUID = xxxxacaminumeroxxxxxx / btrfs defaults, rw, noatime, compress = lzo, ssd, space_cache, inode_cache 0 0
Kaliya waxaan leeyahay btrfs-ka / xididka, midkoodna ha u isticmaalin guri / guri gooni ah ama is dhaafsi
Hubi xiriirka uu dhajiyay @Manuel si loogu daro waxyaabaha aad u fiicantahay SSD-kaaga.
XFS waxay ku sii socotaa horumarka waxayna kujirtaa hagaajinta kernels-ka cusub, dejiso xulashada daahitaanka.
Ku jawaab gabrielix
Miyaad ku isticmaashay tarjumaadda mashiinka faa'iidooyinka? maxaa yeelay waxaa loo qoray si aad u yaab badan.
Ku jawaab Tabris
Waa maxay tarjumaadda mashiinkaasi? Xulashada ereyga?
Waxaan wali ku xayiran ahay ext3
Ilaa aan xawaareynayo ilaa 4 (sida ku xusan imtixaannada aan akhriyo, waa meel aad u fog weli) Ma aanan helin sabab aan ugu beddelo.
Taasi maahan hadafka Btrfs
laakiin waa bilaash?
Iyo ... hadday qayb ka tahay firuska ...
Iga tag ext4 oo si fiican u socota in kasta oo aan haysto mashiin aad u cusub oo ssd ah. 🙂
Ezequiel Ortiz Rossner dijo
Waxaan isticmaalaa XFS tan iyo Ubuntu 10.04 aniga ahaanna waa kan ugu fiican ee shaqeynaya!
Jawaab Ezequiel Ortiz Rossner
Jon burrows dijo
Btrfs wali waxay heystaan ​​waddo loo maro.
Dhanka kale, XFS waa saaxiibkaa.
Jawaab Jon Burrows
Isticmaalka riixitaanka, oo leh kernel 3.12.x, nidaamka faylka oo dhan wuu xumaadaa ka dib qorista disk culus. Digniin…
Waxaan aad uga fekerayaa nidaamka faylasha aan adeegsanayo. Ma garanayo in la isticmaalo BTRFS, ZFS ama XFS. Hada markaan aqriyay maqaalka xiriirkiisa, hoosta ereyadan ku lifaaqan, waxaan u maleynayaa inaan bilaabayo isticmaalka btrfs.
Ku jawaab jose perez
ZFS ee GNU / Linux? Nasiib wacan, waan iska sii fikiray.
Uma baahnid inaad wax badan ka fikirto 😉
Ku jawaab dago
Waxaan dhawaan iibsaday laptop Pavillion ah AMD A8 processor, 8 GB wan oo leh warshad rakibtay daaqado 8.1, waxaan sidoo kale iibsaday disk disk 160 GB ah waxaanan sii waday inaan ku rakibo Ubuntu 14.04 LTS SSD-ka adoo adeegsanaya xiriirka USB-ga dibedda (waxaan u isticmaalaa diskiga SSD banaanka. Kumbuyuutarka si aanan u taaban waxkastoo kujira laptop-ka), rakibaadda Ubuntu waxaan u doortay rakibaadda otomaatiga ah, wax walba waxay u socdeen si qumman, xitaa aniga oo aan sameyn wax hawlgal kale ah ka dib markii la rakibey, markaan kombiyuutarka si toos ah u furo kombuyuutarka menu ayaa u muuqda inuu bixinayo ikhtiyaar u ah in lagu kabo Ubuntu ama Windows, waligay runti weligay iskama dayin Ubuntu kumbuyuutar casri ah oo casri ah oo leh disk disk ah, ma ordo, way duulaysaa, si kastaba ha noqotee waxaan xiiseynayay inaan arko waxa uu qabanayo Ubuntu. Btrfs, anigu ma lihi xirfadaha kombiyuutarka aad u qoto dheer laakiin waxaan isticmaalayay Ubuntu in muddo ah waxaanan jecelahay inaan jilicsado oo aan isku dayo ikhtiyaarrada kala-soocista kala duwan si aan u barbar dhigo natiijooyinka, waayo Inta badan ee aan ka eego shabakadda ma arko casharro dhammaystiran oo u oggolaanaya sameynta jajabka horumarsan ee Linux adoo adeegsanaya qalabka 'disk disk', haddii aad talo ka hayso arrintan, waan ku qanacsanahay dareenkaaga horay ... haaa ... by the hab, hambalyo ... Maqaal wanaagsan.
Subax wanaagsan dhamaantiin, waxaan raadinayay nidaam feylal ku habboon oo aan ku maareeyo feylasha waaweyn, gaar ahaan feylasha fiidiyowga. Hadda waxaan isticmaalaa ext4, laakiin dabcan, waxaan ku hayaa feylal noocyadayda ah oo ku jira gurigeyga / gurigeyga.
Qeybtaan asal ahaan waxay unoqon laheyd inaad aqriso feylasha.
Waxaan isticmaalaa laptop-ka 'Lenovo ideapad s400touch' oo ay la socdaan ubuntu 14.01 iyo 4 qormooyin, / boot, isweydaarsi, iyo iyo / guri.
Salaan iyo mahadsanid waad i aqrisay.
Juan Carlos Sandoval boos haye dijo
Habeen wanaagsan dhamaantiin. Waxaan hayaa mashiin wax soo saar leh diskiga SSD kaas oo aan ku fuulayo OpenSUSE oo leh btrfs. Astaamaheeda waa kuwo aad u faraxsan isla markaana runtii waa mid aad u dhakhso badan oo loogu talagalay joojinta adeegga iyo howlaha bilowga. Nidaamkan feylasha ah wuxuu yaalaa keydka wax soosaarka ganacsigeyga, laakiin waa inaan mar labaad dib u rabaa kumbuyuutarkayga, maxaa yeelay ma taageerin koronto la'aan tanina waxay ahayd nidaamka kaliya ee faylalka la musuqmaasuqay. Ma awoodin inaan dib u helo nidaamka feylka si aan uga dhigo mid la qaadi karo. Iyada oo btrfs-ka dib loo soo celiyo utility-ga waxaan ku guuleystey in aan helo keydka macluumaadka, laakiin si kastaba ha noqotee, horeyba way u musuqmaasuqday suuragalna ma ahayn in lagu soo celiyo iyada oo la adeegsanayo dab-bakhtiyeyaal u gaar ah. Runtu waxay ahayd inay dhibaato weyn ii keentay maxaa yeelay diiwaanka iibka ayaa lumay maalin dhan badhkeed (taasi waa diiwaanno aad u tiro badan) dhibaatooyinka alaabada, iwm. Kuma talinayo ugu dambeyn wax soo saar.
Jawaab Juan Carlos Sandoval
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan isticmaalayaa Xubuntu 14.04.01 LTS tan iyo markii ay soo baxday waxayna igu dhiirrigelisay inaan beddelo ext4. Aniga / Aniga waxaan isticmaalaa btrfs iyo / gurigana waxaan u isticmaalaa xfs runtuna waa ... si fudud heer sare, xitaa xfs iyadoo xfs la koobiyeynta feylasha waaweyn la sameeyo si ka dhaqso badan markii aan isticmaalay ext4. Waxba kama fahmin nidaamka faylasha, laakiin runtu waxay tahay, waxaa laygu dhiirri geliyey inaan isku dayo aadna waan ugu faraxsanahay natiijada, ma garanayo waxa dambe ee dhici doona. 🙂
Waxaan kaliya ku dhex dhacay dhibaatada ah inaan haysto server Linux ah (redhat) oo leh LVM. Waxaan haystay 7gig FS btrfs halkaas oo aan ku dhajiyay wax walba / ka dibna 2G kale oo isku beddel ah. Xaqiiqdu waxay tahay inay ahayd petado hadana waxaa jiray waxyaabo badan oo aan la adeegsan.
Waxaan qaatay oo aan kalabaxay isku bedelka oo aan ku raray mugga macquulka ah ee isku bedelka. Ka dib waxaan ku abuuray qayb fdisk ah inta ka hartay meesha bannaan ee aan la adeegsan iyo mug muuqaal ahaaneed tan waxaanan ku daray kooxda mugga. Ugu dambeyntiina, waan balaariyay VL halkaasoo nidaamka faylka btrfs uu yahay (wax walbana waxaa lagu dhejiyaa /) waxaana abuuray VL cusub oo loogu talagalay isku beddelka oo la magacbaxaya isla si aan loo taaban / iwm / fstab (sharciga ugu yar dadaalka) ).
Illaa iyo hadda wax aan caadi ahayn oo loogu talagalay kuwa garanaya sida loo isticmaalo LVM. Aniga oo adeegsanaya amarrada bandhigga ayaan arki karay 2 VL-kayga (xidid iyo isku beddel) kan asalka ahna durba wuxuu haystay booskii aan u baahnaa. Laakiin dabcan marka la sameynayo df -h waxaan sii wadaynaa inaan aragno awoodii hore ee FS (7gigas). Marka waxaan u dhaqaaqay inaan sameeyo resize2fs waana marka (kadib fariinta qaladka ah) waxaan ogaaday in FS ay ahayd btrfs waana inaan aado internetka si aan u helo macluumaad. Waxaan raadiyay amarrada si aan u sameeyo cabbir kulul (wax kasta oo sii kordhaya xajmigu badanaa lagama maarmaan uma aha in laga dago).
#btrfs nidaamka faylasha dib u habeyn + 10G /
Taasi waxay ahayd amarkii la adeegsaday. Aniguna waxaan dhihi karaa waxay ahayd mid hagaagsan. Waqtigaas waxaan sameeyay df -h markale awooda cusubna way soo baxaysay. Waxaas oo dhami waxay ku xirnaayeen xididka FS (/) oo kuligoodna waxay ka wada socdeen isla server-kan. Adigoon bilaabin wax livecd ama wax ah.
Gabagabadii, wax walba waa sax. btrfs iyo LVM waxay qaataan hooyada dp.
Ku jawaab felix
Abkrim mateos dijo
Mid ka mid ah maqaallo fara badan oo farsamo ahaan loo maleegayo oo khalkhal gelinaya uumiga farsamada oo aakhirkiina aan ka ahayn "faallooyin iyo mahadnaq shaqsiyeed." Ma jiraan xog ujeedo leh, oo taa badalkeeda waxaa jira «Waxaan u maleynayaa» «Waxaan sameeyay baaritaanno (xogtooda aan la daabicin» ...
Dhinaca kale, waxa loo yaqaan 'distro' iyo diirkeed in ka badan waqtigiisii ​​hore, ma aha caddeyn la isku halleyn karo oo ah wax uun.
Ku jawaab Abkrim Mateos
Sidoo kale, isagu xitaa iskama dhibin inuu turjumo nuqullada nuqul ee ku saabsan astaamaha BTRF si wanaagsan. Marka la soo koobo, «maqaalka» caadiga ah, oo aad u deeqsi ah, oo laga dhigo inuu ku guuleysto booqashooyinka ...
Francisco Rivarola dijo
Waad salaaman tihiin dhamaantiin.
Ugu horreyntii, waxa uu yiri Mr. Mateos waa run, wax walba waxay ku saleysan yihiin waaya-aragnimo iyo akhrinta laga soo qaaday "halkaas," laakiin waa run in wax walba ay shaqeeyaan, in yar ayaa fahmi lahayd xogta farsamadaas oo kale.
Marka laga hadlayo fs, waxaan isticmaalaa openSUSE bilawgii, waxaan ku tijaabiyey imisa distoor ah oo wadadayda ka talaabay, oo ku jira netbook aan aad u awood badnayn, 4GB ram iyo cpu celeron 1.6 Ghz x2. Tan iyo markii loo yaqaan '13.2', qaybinta btrfs gudaha / iyo xfs gudaha / guriga waa mid iska caadi ah. SUSE way sameysay sababna waa sidaas. Runtu waxay tahay inay sifiican ushaqeyso, majiraan wax kale oo distoori ah oo u shaqeeya sida OpenSUSE, xawaaraha raadinta ee desktop-ka waa mid deg deg ah, la guuriyay, la gooyay, la dhajiyay wax walbana waa dhakhso, in ka badan debian iyo wax soo saar, (runta ayaa ah inaanan wali fahmin sida Isticmaalayaasha Linux waxay isticmaalaan ubuntu).
Waxaan ku rakibay ubuntu ext4 ka dibna btrfs kan dambena wuu fiicnaa, ma garanayo sababta, laakiin waxay ahayd.
Ku sii wadida btrfs, SUSE iyo shirkadu waxay u isticmaalaan si caadi ah maxaa yeelay waxay ku daraan snapshots soo kabashada, iyadoon khabiir u aheyn inuu ka soo kabsado haddii ay dhacdo musiibo.
Runtu waxay tahay, ma jiraan wax ka wanaagsan OpenSUSE, oo maaha inaad sii joogtid 13.1 oo keliya weligiis, isbeddelada 13.2 waa kuwo cajiib ah. Kuma talin lahaa ama istcimaali lahaa wax aan ka ahayn chameleon distro.
Dhamaan waad salaaman tihiin iyo… QOSOL BADAN !!
Jawaab Francisco Rivarola
saytuun ah dijo
Waxaan u isticmaalay nidaamka feyl btrfs-ka microsd-ka waana macquul aheyn inaan hadhow qaabeeyo, kadib markaan isticmaalay nidaamyo qaabeyn aan tiro lahayn. Khibrad xun, inkasta oo nidaamku u muuqdo mid rajo leh, gaar ahaan disks-yada, illaa inta laga adkaanayo dhibaatooyinka sida tan igu dhacay oo kale.
Ku jawaab Olivier
QPS: Kormeeraha Nidaamka Miisaanka fudud ee lagu qoray Qt